Jeeva Raj Budhathoki Archives - साहित्य सङ्ग्रहालयसाहित्य सङ्ग्रहालय
Tag Archives: Jeeva Raj Budhathoki
बहरबद्ध गजल : कहाँ खाेजिएन ?
~जीवराज बुढाथोकी~ सवै ठाउँ माया, कहाँ खाेजिएन ? जहाँ खाेजुँ भन्थें, कहीं भेटिएन । अधूराे रह्याे त्याे, अपेक्षा सधैंकाे, नभेटे नि चित्त, बुझेकाे थिएन ।
गजल : मन’को घर होस
~जीवराज बुढाथोकी~ सुन्दर एउटा मन’को घर होस ! सधैंभरि गृहलक्ष्मी’को भर होस !! थकाइले चुर भई, पुग्दा घरमा, भरि गिलास दुधमा’थि तर होस !!
बहरबद्ध गजल : भाग्य पथ
~जीवराज बुढाथोकी~ लाग्छ भित्रै भित्र बल्ने, अग्नि ज्वाला कै कथा छ । पाेल्छ जिब्राे भन्न खाेन्दा, मात्र सुन्दा पाे मजा छ। अाँसु पाेख्दा हुन्छ शीतल्, हास्न थाले पाेल्छ फेरि, जान्छु लैजा भाग्य बाटाे, अन्धकारै लाै जता छ ।
बहरबद्ध गजल : हराएँ म
~जीवराज बुढाथोकी~ छन्दः मेची कल्पना मै हराएँ म । तर्कना मै रमाएँ म । मन्भरी तिर्सना बाेकी, पाउ चाल्नै डराएँ म ।